၂၆/၁၀/၂၀၁၉ ရက်​​နေ့ ​ရွှေနဒီအမြန်​ယဉ်​​ပေါ်မှ လူ ၆၀ ခန့်အား ပြန်​​ပေးဆွဲ​ခေါ်​ဆောင်​သွားခဲ့​သော AA အကြမ်းဖက်​​သောင်းကျန်းသူ သူပုန်​အဖွဲ့၏ လူမဆန်​မှုများလွတ်မြောက်လာသူမှ ထုတ်ဖော်ပြောကြား : MYANMAR ARTICLE
၂၆/၁၀/၂၀၁၉ ရက်​​နေ့ ​ရွှေနဒီအမြန်​ယဉ်​​ပေါ်မှ လူ ၆၀ ခန့်အား ပြန်​​ပေးဆွဲ​ခေါ်​ဆောင်​သွားခဲ့​သော AA အကြမ်းဖက်​​သောင်းကျန်းသူ သူပုန်​အဖွဲ့၏ လူမဆန်​မှုများလွတ်မြောက်လာသူမှ ထုတ်ဖော်ပြောကြား
​သေကံမပါလို့ တပ်​မ​တော်​ရဲ့အဖက်​ဖက်​ကကြိုးပမ်းမှု​တွေ​ကြောင့်​ တပ်​မ​တော်​ကယ်​​ဆယ်​​ရေးအဖွဲ့​တွေနဲ့ဆုံပြီး သူ​တောင်းစား​တွေလက်​ထဲက လွတ်​​မြောက်​ပြီး လုံခြုံအန္တရာယ်​ကင်းတဲ့​နေရာကို ​ရောက်​ရှိခဲ့တာပါ။
ရဲတသ စိုင်းနိုင်​​အောင်​ မ​သေဘဲ ပြန်​လွတ်​​မြောက်​လာတာကို ဝမ်းသာရမယ့်​အစား တပ်​မ​တော်​ကိုပုတ်​ခတ်​ချင်​တာနဲ့ “လက်​ပြန်​ကြိုးတုပ်​ပြီး ​သေနတ်​နဲ့အပစ်​ခံရတာ​တောင်​ မ​သေတဲ့ ဂြိုလ်​သား”ဆိုပြီး ရဲတသစိုင်းနိုင်​​အောင်​ရဲ့ ဓာတ်​ပုံနဲ့တကွ ​လှောင်​​ပြောင်​​နေကြတဲ့ ​UG​အောက်​လုံးသမား ​စောက်​ရှက်​မရှိတဲ့​ကောင်​​တွေ မြင်​​အောင်​ကြည့်​ပါ။
ရိုက်​နှက်​ ညှင်းပန်းနှိပ်​စက်​လို့ ရပါသလား..?
​သေနတ်​နဲ့ပစ်​ခတ်​ပြီး သတ်​ဖြတ်​လို့ ရပါသလား..?
ဒီလို ​စောက်​ဆင့်​မရှိတဲ့ အမျိုးယုတ်​သူပုန်​အဖွဲ့ကို ညှာတာ​ထောက်​ထားသင့်​ပါသလား..?
AAသကသ သူပုန်​အဖွဲ့မှလွတ်​​မြောက်​လာ​သော ရဲတသ စိုင်းနိုင်​​အောင်​_အပိုင်း ၁
AAသကသ သူပုန်​အဖွဲ့မှလွတ်​​မြောက်​လာ​သော ရဲတသ စိုင်းနိုင်​​အောင်​_အပိုင်း ၂
AAသကသ သူပုန်​အဖွဲ့မှလွတ်​​မြောက်​လာ​သော ရဲတသ စိုင်းနိုင်​​အောင်​_အပိုင်း ၃
AAသကသ သူပုန်​အဖွဲ့မှလွတ်​​မြောက်​လာ​သော ရဲတသ စိုင်းနိုင်​​အောင်​_အပိုင်း ၄
ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ညီနောင် မဟာမိတ်(၃)ဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်
နတ်တွေ မိမိလိုအင်ကို မနေနိုင်ပဲ ဖြည့်ဆည်းပေးရသည့် ဂါထာတော်
ဒိုင်ခွက်မှ သိနိုင်သော သင့်ကားရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
အသားမဲတယ် ပြောလို့ ဟင်းချက်ကျွေးပြီး အဆိပ်ခတ်သတ်ပစ် လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး
“တိုင်းရင်းသားမို့ အားမပေးချင်တာလား အားပေးကြပါဦးဗျ” ဆိုတဲ့ ဘင်ဂျမင်ဆုမ်
ဘယ်သူ့ ဆီကမှ ထောက်ပံ့စရိတ်မယူပဲ ပုဂံဆေးအမှိုက်ကောက်အလုပ်နဲ့ကျောင်းစရိတ်ရှာပြီး ဘွဲရအောင်ယူခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား